DFS oo wadahadal la furtay xubno ka tirsan Al-shabab
October 20, 2014 (GO)- Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada-hadal aan toos ahayn la furtay xubnaha qunyar socodka ah ee ku jira Al-shabab xilli uu socdo hawlgal ballaaran oo kooxdaas lagula dagaalamayo.
Danjiraha Somalia u fadhiya dalka Kenay Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa u sheegay wargeyska The East African ee kasoo baxa isla dalka Kenya in Dowladda Federaalku wada-hadal aan toos ahayn la furtay xubno ka tirsan Al-shaba isagoo intaas raaciyey in dowladdu mar walba diyaar u tahay inay la hadasho Al-shabab hadii kooxdaasi ka tanaasusho fikirka xagjirnimada.
" wada-hadallo aan rasmi ahayn ayaan la furnay Al-shabab balse wada-xaajoodka dhabta ahi wuxuu iman karaa marka Al-shabab si cad u qeexdo inay doonayso qayb inay ka noqoto xal u helidda Soomaaliya, hadii kel suuragal ma noqon doonto in lala hadlo kuwa dilaya dadka aan waxba galabsan" Danjire Ameeriko ayaa sidaas yiri.
Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo isna ah af-hayeenkii hore ee Villa Somaliya ayaa wargeyska The East African u sheegay in dadka sida aadka ah u aaminsan afkaarta xagjirka ahi ku yaryihiin gudaha Al-shabaab marka laga reebo hogaamiyeyaasha sare iyo kuwa dhexe ee kooxda, haseyeeshee xubnaha aan xilalka haynin ee Al-shabab u badan yihiin kuwo la khalday, kuwo dhaqaale ahaan u galay iyo kuwo lagu khasbay.
Ururka Al-shabab oo sideed sano laga joogo markii markii la asaasay, waxay awoodiisu u muuqataa mid sii baa ba'eysa laga soo bilaabo sanadkii 2012. Dadka u dhuun daloola siyaasadda Al-shabab ayaa saadaaliyey in kooxdaasi kala yaaci doonto maadaama uu meesha ka baxay hogaamiyihii hore ee kooxda Axmed Cabdi Godne.
Godane oo ahaa nin hoggaanka Al-shabaab gacan bir ah ku hayey waxaa lagu diley duqeyn diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanku fuliyeen bishii September ee lasoo dhaafay kana dhacday meel u dhow degmada Baraawe.